व्यापार विवाद वकील कानूनी व्यवस्था खेलमा पुस्तकालय
व्यापार विवाद छन्, एक परिणम र हटाउन नसकिने लागत को एक व्यापार चलिरहेको छ । सामान्यतया, एक व्यापार विवाद बीच उठ्छ कारोबार गर्दा तिनीहरूले भन्दा असहमत को मामला एक अनुबंध कि दुवै दल, तर एक व्यापार विवाद उत्पन्न गर्न सक्छन् मा कुनै पनि नम्बर को तरिकामा.
कारोबार रोजगार वा काम ठेकेदार, खरीदारों, आपूर्तिकर्ता, वा व्यापार साझेदार अक्सर ठेक्का विवाद छ । सायद एक पार्टी विश्वास छैन त्यो भुक्तानी ठेक्का मूल्य, एक पार्टी डेलिभर भएको थिएन सामान वा सेवा त्यो प्रतिज्ञा थियो, वा वितरण बाहिर थियो को को सहमत समय सीमा छ । जे होस्, अनुबंध असहमति माथि बनाउन धेरै व्यापार विवाद छ । कारोबार छुटकारा सामान वा सेवा ग्राहकहरु गर्न सक्छन् विवाद संग आफ्नो ग्राहकहरु सन्दर्भमा कि सामान वा सेवा वितरित थिए वा माथि मानक गर्न आवश्यक छ । कारोबार सामान्यतया प्रदान निहित वारंटी कि उत्पादनहरु छन् कार्यात्मक र परिचालन छ । जब उत्पादन छैन भने वा उत्पादनहरु वास्तवमा हानि उपभोक्ता, दावा विरुद्ध व्यापार अक्सर दायर गरेको छ । रोजगार दाबी अक्सर दायर सम्बन्धित कारोबार, विशेष गरी सम्बन्धित आफ्नो राखने र नौकरी देखि निकाल प्रचलन छ । कारोबार गर्न सकिँदैन भेद गर्नु वा यसको कर्मचारीहरु परेशान, र के भनेर ती आफूलाई पर्दाफास गर्न व्यापार दाबी छ । जबकि, एक व्यापार गर्न सक्दैन ढाक्नु देखि नै सबै दायित्व, यो सीमा को संभावना व्यापार विवाद छ । कारोबार संस्थान नीतिहरू र प्रक्रियाहरु शासन कि आफ्नो दिन-देखि-दिन संग अन्तरक्रियामा कर्मचारीहरु र लेनदेन संग अन्य कारोबार को संभावना कम विवाद छ । उदाहरणका लागि, एक व्यापार प्रयोग मानक, उद्योग स्वीकृत प्रकारका संग भाषा को लागि सबै आफ्नो व्यापार व्यवहार गर्न कम सम्भावना हुन्छ, नेतृत्व विवाद सन्दर्भमा आफ्नो अनुबंध सम्बन्ध छ । कारोबार गर्नुपर्छ रोजगार नीतिहरू लागि राखने र नौकरी देखि निकाल कर्मचारीहरु । एक कुशल रोजगार वकील मदत गर्नुपर्छ व्यापार ड्राफ्ट यी नीतिहरू, त्यसैले तिनीहरू संग मिल्दो हो वर्तमान रोजगार व्यवस्था. कारोबार लागि छ कि ग्राहकहरु, प्राप्त छूट वा निश्चित बनाउन सबै उत्पादनहरु स्पष्ट र छ लागू उत्पादन चेतावनी जोगिन मदत गर्न सक्छ दायित्व हो । यदि तपाईंको व्यापार गर्न असमर्थ छ रोक्न दाबी, भर सानो दावा अदालत सुल्झाउने लागि उल्लेखनीय बिल, ऋण, वा रोजगार कुराहरू जब हर्जाना भित्र गिर सानो दावा’ सीमा छ । त्यहाँ अक्सर वैकल्पिक विवाद संकल्प खंड मा व्यापार ठेके आवश्यकता जो कुनै पनि विवाद गर्न सम्बन्धित अनुबंध माध्यम समाधान गर्न सकिन्छ बाध्यकारी मध्यस्थता वा मध्यस्थता खोज्न अघि दाखिला सूट. मध्यस्थता एक प्रक्रिया हो को लागि समाधान बीच विवाद दुई दल बाहिर अदालतले प्रणाली तर भएको छ यस्तै एक परीक्षण मा दुवै दल तर्क आफ्नो मामला गर्न»मध्यस्थ.»मध्यस्थ सुन्नुहुन्छ दल’ समस्या र तर्कको त निर्णय मा एक संकल्प । मध्यस्थता को एक प्रकार छ बातचीत बीच धेरै दल द्वारा एक तटस्थ तेस्रो पार्टी (मध्यस्थ).
मध्यस्थता विपरीत छ मध्यस्थता मा कि मध्यस्थकर्ताको छैन निर्णय सन्दर्भमा दल र संकल्प सट्टा, मध्यस्थकर्ताको गरेको एकमात्र जिम्मेवारी छ गर्न मदत गर्न प्रयास दल आउन एक संकल्प
भने को दल गर्न सक्दैन आफ्नो विवाद समाधान बाहिर, अदालत को एक पक्ष गर्न सक्छ फाइल सूट अन्य विरुद्ध छ । व्यापार विवाद, धेरै जटिल हुन सक्छ, समय- र समाधान गर्न गाह्रो छ । एक व्यापार वकील मदत गर्न सक्छ, तपाईं संकल्प आफ्नो व्यापार विवाद, कि माध्यम बाध्यकारी मध्यस्थता, मध्यस्थता, वा मुद्दा, र मदत गर्न सक्छ, आफ्नो मामला समाधान
वकिल अनलाइन च्याट